Zazavavy Maleziana 14 taona manambady · Global Voices teny Malagasy
Zazavavy Maleziana 14 taona manambady
Voadika ny 08 Desambra 2010 7:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, Français, Swahili, Italiano, Shqip, English
Vao haingana izay, nisy tatitra nanambara fa nisy fanambadiana namboarina teo amina zazavavy 14 taona sy mpampianatra 23 taona ‘izay nanainga adihevitra mikasika ny fanambadian'ny ankizy’. Araka ilay lalàna Syariah any Malezia, izay manana fahefana hitsara ireo Silamo, dia mila mahazo ny faneken'ny Fitsarana Syariah ireo Silamo latsaky ny 16 taona vao mahazo alàlana hiditra amin'ny fanambadiana. Tamin'ity tranga ity, dia namela izy roa hivady ny Fitsarana.
Glenda Larke dia mino fa tsy mifankaiza amin'ny fanodikodinana zaza tsy ampy taona ny fampakarana ankizy ho vady, na dia manara-dalàna aza izany.
Tsy olon-dehibe ny ankizivavy mpianatra 14 taona. Tsy mbola vehivavy lehibe izy, na dia efa manomboka tonga fotoana aza. Midera ireo olon-dehibe izy. Ny finoany sy ny kolontsainy dia mibaiko azy hankatoa ireo zokiny, indrindra ny raiamandreniny. Mora mino sy marefo izy.
Ny lehilahy 23 taona naka azy ho vady – lehilahy nahita fianarana, fa tsy tahaka ireo lehilahy izay mbola miaina anatina fiarahamonin'ny taonjato faha-19 izay miasa manomboka amin'ny faha-12 taonany ireo ankizy ary manambady amin'ny faha-14 taonany – dia mpanodinkodina zaza tsy ampy taona tsotra izao.
Mihevitra i B.Joe fa samy tsy voahajan'ny Fitsarana Syariah sy ny raiamandreniny ny zon'ny ankizy sy ny zaza tsy ampy taona.
Ary ny zavatra mampihomehy amin'ity tantara ity dia neken'ny Fitsarana Syariah ity fanambadiana ity – fa inona no mitranga amin'ny fiarovana ny zon'ny zaza tsy ampy taona? Maninona ny raiamandreny no tsy afaka miandry taona vitsivitsy mandrapahafahan'ity zaza tsy ampy taona ity mandray ny fanapahan-keviny manokana ?
Un:dhimmi ihany koa dia mino fa diso sy tsy eken'ny fomba fisainana izany.
ny fandalinana nifandimby dia mampiseho fa ireo zazavavy miroso amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny taona tahaka ny azy izao dia mijaly fa tsy hoe fotsiny simba ny fitaovanam-pananahanyizay mbola an-daàlam-pivoarana, fa mety hisy ihany koa ny fikorontanana ara-tsaina.
Kanefa, Fyzal dia naka toerana tsy miandany na amin'iza na amin'iza kokoa mikasika ity raharaha ity.
Tamin'ity tranga iray etsy ambony ity dia nahazo famelàna tany amin'ny Fitsarana Syariah izy ireo. Midika izany fa tokony hahatoky ny Mpitsara Syariah isika – tsy maintsy efa nanadihady mikasika izay rehetra ho vokany izy ireo talohan'ny nanekeny.
Ny fanekena tahaka izao, mino aho, dia neken'izao Mpitsara noho ny fahatokisana napetrany tamin'ilay lehilahy ny amin'ny hikarakarany tsara ilay zazavavy ary ilay zazavavy kosa hitombo tsara eo anoloan'izany fikarakarana azy izany. Raha niahiahy mikasika izany ireo mpitsara, dia tsy nekena ny tahaka izao.
Toy izany, dia apetrako izany any amin'ny raharaha mikasika ny fanambadian'ireo zazavavy Silamo latsaky ny 16 taona, avelao hanao ny asany ny Fitsarana Syariah. Fantatr'izy ireo rehefa tokony na tsy tokony ho ekena ny raharaha iray.
Nefa araka ny hevitro dia mbola ilaina ny firesahana mivelatra kokoa eo amin'ny Governemanta sy ireo manam-pahaizana mikasika ny Syariah mba handinihana ny amin'ity tranga ity.